अव सञ्जय नाममा मात्र सिमति रहेनन , द राइफल युुनिटीमा अध्यक्ष भएपछि थप परिचय थपियो , जिम्मेवारीलाइ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता – Hamro Rapti 88.5 FM
हसिलो अनुहार , भर्खरै युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको , उमेरले २० काटेका राप्ती २ गड्यौलीका सञ्जय व्लोन तामाङको परिचय द राइफल युुनिटि संग पनि जोडिएको छ । सन्जयसंग मंगलवार साझ ५ बजे भेट गर्ने समय जुरेको थियो । केहि दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा छाएका तिनै युुवालाइ छलफलको लागी हामीले खुरखुरेको थ्रि सिस्टर केक सपलाइ मिट प्वाइण्ट बनाएका थियौ । साझ ५ बजे अघिनै म र सञ्जय श्रेष्ठले तामाङलाइ भेट गर्ने मेसो मिलाएका थियौ ।
माथि लेखिएका झै हसिलो अनुहार, कम बोलने स्वभावका सञ्जय यो एक हप्तामा सामाजिक सञ्जालमा अलि छाएका थिए । धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको थियो । द राइफल युुनिटीको नामको संस्थामा अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाएकोमा राप्ती २ नम्वर वडाका अध्यक्ष श्याम सुुन्दर उप्रेतीले बधाइ तथा शुुभकामना दिदै खादा लगाइ दिनुु भएको तस्विर अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै छाइरहेको छ ।
राप्ती २ मा रहेको युुवाहरुको समुहलाइ द राइफल युुनिटीको नामले चिनिन्छ । विभिन्न सामाजिक काम , विभिन्न सचेतना मुलक काममा उत्तिकै सक्रिय युुनिटीले अहिले सञ्जय व्लोन तामाङ नया अध्यक्ष पाएको छ । यसअघि गणेश तामाङ अध्यक्ष रहनुु भएको थियो । गणेशको कार्यकाल पछि उहाको व्यवसाय र पेशाको व्यस्तताको कारण सञ्जय जो युुनिटीका उपाध्यक्ष रहनुु रहनुु भएको थियो । उहानै अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुु भएको छ ।
पहिलो भेट अनि पहिलो संवादमा मैले वडाध्यक्षको नै बधाइ र शुुभकामना लिनुु हुुदै अध्यक्ष हुनुभएको छ त ? भन्ने प्रश्नमा सञ्जय हास्दै भन्दै हुुनुुहुुन्थ्यो वडा नं. २ को वडाध्यक्ष श्याम सुुन्दर उप्रेती हुुनुुहुुन्छ, उहानै द राइफल युुनिटीको अभिभावक हुुनुुहुुन्छ । वडाको विभिन्न जनचेतना काममा उहाको सहकार्यमा हामीले धेरै काम गदै आएका छौ र अव पनि गदै जानेछौ ।
द राइफल युुनिटीको अध्यक्ष भएपछि सञ्जयलाइ आफुुले केहि समाजमा योगदान दिनुुपर्ने बताउनुु भयो । यो खालको फिलिङ आएको बताउनुु भयो । उहालाइ यसअघि युुनिटीमा छुु जे होला होला जस्तो मात्र लाग्थ्यो । कहि कतै काम भएमा , केहि कार्यक्रम भएमा जाने आउने सामान्य लाग्थ्यो । जव उहालाइ अध्यक्ष भएपछि विविध किसिमको प्रतिक्रिया आयो तव मात्र आफुु र आफ्नो संस्थाको महत्व बुुझेको उहाले बताउनुु हुुन्छ ।
यसअघिको नेतृत्वले बचाइ राखेको साखलाइ आफुुले अझ व्यवस्थित गर्ने र गराउनेमा अहिले सञ्जय लागी पर्नुुभएको छ । उहाको समुुहमा रहेका उपाध्यक्ष , सचिव र टिमलाइ वयवस्थापन गर्ने कार्यसमिती पनि उहाको लागी निकै महत्वपुर्ण खम्वा रहेको जस्तो लाग्छ । सञ्जयले मेरो टिमले एकै निर्णय र एकै साथ सल्लाह र सुुझावमा विभिन्न काम गर्नेछौ । उहाले भन्नुभयो । उहाले अव समुुदायमा युुवा नेतृत्वको लागी आफुुहरु सक्षम छौ भन्ने देखाउनको लागी युुनिटीले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताउनुु भयो ।
युुनिटीले देखेको सपना र बनाएका विभिन्न योजनालाइ साकार पार्नको लागी सञ्जय अहिले प्रयास गदै हुुनुुहुुन्छ । सञ्जयलाइ सामाजिक काममा काम गदै आएको अनुुभव भएता पनि नेतृत्वको लागी यो पहिलो अनुुभव हो । केहि गर्छुु भनेर नेतृत्व सम्हालेको छु, अव के हुुन्छ हेरौ तर हार भने खाइन्न । अहिले सञ्जयका मोवाइलमा म्यासेज र म्यासेन्जर र कल निरन्तर आउन थालेको छ । आफुुसंगै पढेका वाट मात्र नभइ नचिनेकाले पनि बधाइ र शुुभकामना दिन थालेका छन । र त उनि अहिले दङग रहेका छन ।
सञ्जय अहिले कक्षा १२ को परिक्षा उर्तिण गरेर बस्नुु भएको छ । बिरेन्द्रनगरको जन आर्दश क्याम्पस वाट व्यवस्थापन संकायमा कक्षा १२ उर्तिण गर्नुभएका सञ्जयले कम बोल्ने स्वाभावका भएका कारण धेरै कुरा गर्न चाहनुु भएन । अन्तमा हामी युुवाले गर्न लागेका काम र प्रयासलाइ समुुदाय सम्म लैजानको लागी प्रयत्न गरिदिन अनुुरोध मात्र गर्नुुभयो ।
यहि साता राप्ती नगरपालिकाको २ मा रहेको द राइफल युुनिटीमा सञ्जयको नेतृत्वमा नया कार्यसमिती चयन भएको छ । उपाध्यक्षमा विवेक गोले , सचिवमा विवेक लामा र टिम व्यवस्थापनमा फ्यान्जो लामा चउन भएका छन । नया कार्य समितीलाइ राप्ती नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्षले शुुभकामना दिनुु भएको छ ।
Previous हाम्रो राप्तीको स्टेशन इन्र्चाजको जिम्मेवारी विसुन्केलाइ
Next खेलकुद सामाग्रि वितरण